Guddi uu Magacaabay Madaxweyne Waare oo gaaray Jowhar - Awdinle Online
Magaalada Jowhar ee Gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa waxaa gaaray Guddiga Farsamada soo xulista Baarlamaanka labaad ee Hir-Shabeelle, kuwaas oo tan iyo markii la Magacaabay ku sugnaa Magaalada Muqdisho.
Garoonka diyaaradaha Magaalada Jowhar waxaa Xubnaha Guddiga kusoo dhaweeyay Xxildhibaano ka tirsan Baarlamaanka Hir-Shabeelle iyo Maamulka Magaalada jowhar.
Guddiga Farsamada soo xulista Baarlamaanka labaad ee Hir-Shabeelle oo ka kooban 11 Xubnood ayaa waxaa ay maalmaha soo socda guda geli doonaan soo xulista Baarlamaanka labaad Hir-Shabeelle.
Sidoo kale Xubnaha Guddiga ayaa waxaa ay kulamo kala duwan la qaadan doonaan Maamulk,a degmada Jowhar iyo Odayaasha dhaqanka degaannada hir-Shabeelle si ay ugala hadlaan Arrimaha soo xulista Baarlamaanka.
Previous articleSarkaal Boolis oo lagu dilay Muqdisho & faah faahin laga helayo
Next articleRa’iisul wasaare Rooble oo si rasmi ah xilkiisa ula wareegay+Sawirro